Xitaa haddii aad tahay user sare ee qalabka Apple oo ay leeyihiin lacagta hufan oo waayo aragnimo ah ee iyaga oo isticmaalaya, waxaad weli u baahan in ay dib u kor xogta macruufka aad si aad PC (Mac tusaalahan). Waxaa khasab ah in ay dib u aad iDevice si aad u computer si loo hubiyo in xogta aad iyo goobaha kale marna ma lumen wax kiiska ka qaldan qalab aad u dhaco.
Taasi lagu sheegay, haddii aad computer Mac ah ay leeyihiin iyo sidoo kale la casriyeeyay aad iDevice (iPhone 4s u banaanbaxan) in macruufka 9, waxaad raaci karaan tilmaamaha tallaabo-tallaabo hoos ku siiyey in ay dib u kor macruufka aad 9 si aad u computer Mac isticmaalaya Lugood iyo la isticmaalayo qalab dhinac saddexaad.
Qaybta 1. Back Up macruufka 9 ilaa Mac Isticmaalka Lugood
Qaybta 2. Back Up macruufka 9 ilaa Mac Isticmaalidda dhinac saddexaad Tool
Qaybta 3. Soo Celinta macruufka 9 ilaa Mac ka kaabta Lugood
Qaybta 4. Soo Celinta macruufka 9 ilaa Mac Isticmaalka Wondershare MobileTrans u Mac
1. Hubi in nooca ugu dambeeya ee Lugood waxaa lagu rakibay on your computer Mac. (OS X El Capitan on computer Mac waxaa halkan loogu isticmaalayaa.)
2. Isticmaal cable xogta asalka ah in ay ku xidhmaan aad iPhone socda macruufka 9 si aad u computer.
3. Haddii aan si toos ah u bilaabay, guji icon Lugood ay ka qabaan in ay bilaabaan barnaamijka gacanta.
4. Sug inta Lugood ogaadaa aad iPhone.
5. Marka la ogaado, ka sareysa, guji icon iPhone.
6. interface ee soo socda, si loo hubiyo in ay Kooban doorasho la doorto ka hoos Settings qaybta ka sare ee ay leeg- bidix.
7. Laga soo hayaan category leeg- saxda ah, riix Back Up Hadda button ka hoos Back Gacanta Ilaa iyo Soo Celinta qaybta.
8. Sug inta Lugood taageeray ilaa xogta aad iyo kaydiya galka gurmad on your computer Mac. Fiiro gaar ah : Waxaad ka eegi kartaa horumarka gurmad ka qaybta sare-dhexe oo ka mid ah Lugood 'interface.
9. Marka sameeyo, ku dhow Lugood iyo sii adiga oo isticmaaleya isticmaale iPhone sida caadiga ah.
Inkastoo dhowr qalab dhinac saddexaad ayaa diyaar u ah download iyo kuwa badan oo iyaga ka mid ah waa lacag la'aan ah si aad u hesho, mid ka mid ah codsiyada ugu casri ah si ay si wanaagsan iyo hufnaan u xaliyaan ujeedada waxaa MobileTrans ee ay Wondershare.
Wondershare MobileTrans aad ma aha oo kaliya caawisaa gurmad iyo soo celinta xog iDevices aad 'iyo ka your computer Mac siday u kala horreeyaan, waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad si buuxda u masixi qalabka aad taas oo ah mid aad u muhiim ah marka aad rabto in la tuuro ama dib aad telefoon ama doonayaan in ay iibiyaan si ay qof kale .
• Phone in Transfer Phone - Kuu ogolaanayaa inaad xog ka mid phone wareejiyo kale fudayd.
• kaabta Phone - Kuu ogolaanayaa inaad dib ilaa xogta aad telefoonka ee aad Windows ama Mac PC.
• Resstore ka hayaan - Kuu ogolaanayaa inaad si loo soo celiyo xogta si aad telefoonka ka Blackberry ah ee hadda jira, Wondershare MobileTrans, iCloud, ama Lugood files gurmad.
• masixi Your Old Phone - Halkaan hoose waxaad si buuxda u masixi telefoonka jir ah ka hor inta aadan dib ama iibiyo qof kale.
Dib macruufka 9 ilaa Mac Isticmaalka Wondershare MobileTrans
1. Isticmaal link kor ku xusan in ay soo baxdo iyo rakibi Wondershare MobileTrans u Mac on your computer Mac. (OS X El Capitan halkan loo isticmaalo bandhig.)
2. Burcad barnaamijka iyo buuxiso kaluumaysiga iyo diiwaangelinta.
3. Marka sameeyo, haddii, ku dhow iyo in dib loo bilaabayo Wondershare MobileTrans loo baahan yahay.
4. Ka interface ugu weyn, riix Up Dhabarkaaga Phone button.
5. suuqa kala socda, si loo hubiyo in ay Source Murayaad dhanka bidix ee bandhigayaa aad ugu xiran iPhone iyo Computer Murayaad ee xaq u leedahay icon PC.
6. Laga soo bilaabo bartamihii laba muraayadood, hubi checkboxes matalaya shay in aad rabto in aad Wondershare MobileTrans in gurmad.
7. Marka la doortay, qeybta hoose-dhexe ee suuqa, riix Start Copy .
8. suuqa kala socda, sug ilaa iyo inta waxyaalaha la doortay ayaa la xoojiyaa si aad u computer Mac.
9. Click OK markii habka gurmad ah si guul ah u dhameystiray.
10. Barkinta aad iPhone ka kombiyuutarka iyo bilaabin isticmaalka caadiga ah waa.
1. Raac tallaabooyinka 1 ilaa 6 ka Up Back macruufka 9 ilaa Mac Isticmaalka Lugood qaybta sharxay ka hor.
2. Laga soo hayaan category in ay leeg- saxda ah, oo ka soo hoos Back Gacanta Ilaa iyo Soo Celinta qaybta, riix Soo Celinta kaabta button.
3. Laga bilaabo furay Soo Celinta kaga imaanayo sanduuqa, dooran gurmad aad door bidayso ka iPhone Magaca liiska hoos-hoos.
4. Riix soo celi marka loo sameeyo.
5. Sug ilaa xogta la soo celiyo aad iPhone.
6. box fariin ku xiga oo u muuqata, riix OK iyo sug ilaa iPhone si guul ah ku dul Banaadir dib u soo celinta.
1. Daahfurka Wondershare MobileTrans on your computer Mac.
2. Laga interface ugu weyn, riix Soo Celinta hayaan ka button.
3. Laga bilaabo liiska soo bandhigay, guji ka MobileTrans gurmad file . Fiiro gaar ah : Haddii kale, waxaad sidoo kale riixi kartaa dhibaato kale ka mid ah liiska sida loogu baahan yahay.
4. Ka Murayaad bidix ee suuqa kala socda, guji in ay doortaan file gurmad in aad rabto in aad soo celiso oo aad iPhone. Talo : Waxa lagu talinayaa in la soo qaado ay gurmad file ugu dambeeyey sida ay ku jiri karaan macluumaadka ugu dambeeyey.
5. Laga soo bilaabo qaybta dhexe ee suuqa, ka hubi checkboxes matalaya waxyaabaha ka gurmad file xulay in aad rabto in aad soo celiso oo aad iPhone.
6. Hubi in aad iPhone waxaa soo bandhigay in ay leeg- saxda ah. Fiiro Gaar ah : Optionally, waxaad ka hubin kartaa xogta oo cad ka hor inta nuqul checkbox in ay leeg- saxda ah iyo xaqiijiso doorashada marka ay keentay in haddii aad rabto oo dhan xogta jirta in laga saaro ka hor inta Wondershare MobileTrans dib u soo celineysa ah xoojiyaa walxaha.
7. Marka la sameeyo, riix Start Copy button ka qaybta hoose-dhexe ee suuqa.
8. Marka uu furmo suuqa soo socda kor u furmay, sug ilaa iyo inta geedi socodka dib u soo celinta ee si guul ah u dhameystiray.
9. Click OK marka loo sameeyo.
Inkastoo Lugood waa awood ku filan oo ay gurmad iyo soo celinta xogta ka timaada iyo in aad iPhone siday u kala horreeyaan, Wondershare MobileTrans kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan hawsha granularly oo aan ka saareen faylasha jira haddii cayimay. Tani waa wax Lugood iyo iCloud ma bixiyaan.
> Resource > Ladnaansho > Sida loo kaabta macruufka 9 ilaa Mac